MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardAdvance Payment Promotion mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက် ရဲ့လစဉ်ကြေး ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများနှင့် MPT branded ဆိုင်များတွင် ပေးဆောင်နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ (၆) လစာ ကြိုတင်ငွေပေးဆောင် ပါက ၅% သက်သာခွင့်နှင့် (၁) နှစ် ကြိုတင်ငွေပေးဆောင်ပါက ၁၀% ထိသက်သာခွင့်ကို ရယူလိုက်ပါ။
*Bandwidth upgrade promotion until end of Dec 22
*All FTTH users who join MPT until May 22 are eligible.
အမြန်နှုန်း လစဉ်ကြေး6လစာ ကြိုတင်ငွေစုစုပေါင်း
(5% လျှော့ဈေး) ၁၂ လစာ ကြိုတင်ငွေစုစုပေါင်း
15 20 Mbps 32,000 182,400 345,600
25 30 Mbps 43,000 245,100 464,400
50 60 Mbps 76,000 433,200 820,800
100 110 Mbps 120,000 684,000 1,296,000
ဒုံးပျံအိမ်သုံးအင်တာနက် သုံးစွဲနေသူများအနေဖြင့် ယခုပရိုမိုးရှင်းတွင် ရယူလိုပါက မည်မျှပေးဆောင်ရမလဲ?
၁။ ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း ပရိုးမိုးရှင်းကို သိရှိနိုင်ပါရန် MPT အမည်ဖြင့် SMS ပေးပို့ထားပါသည်။ ယင်း SMS တွင် လျှော့စျေးအပါအဝင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ကြိုတင်ငွေ ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏ အတိအကျအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်။
၂။ ကြိုတင်ငွေပေးချေပြီး လျှော့စျေးရယူခြင်း ပရိုမိုးရှင်းအား လျှောက်ထားလိုပါက သုံးစွဲသူသည် လက်ရှိ ကျန်ရှိနေသော ကြွေးကျန်များ အားလုံးကို ပေးဆောင်ရပါမည်။ (ပြီးခဲ့သည့်လတွင်ထွက်ရှိခဲ့သော ဘေစာရင်းနှင့် ယင်းမတိုင်ခင်လများတွင်ထွက်ရှိထားခဲ့သော ဘေလ်များ)
* လက်ရှိ ကျန်ရှိနေသော ကြွေးကျန်များ = ပြီးခဲ့သည့် လမကုန်မှီ အချိန်အထိ နောက်ဆုံးထားပေးဆောင်ရမည့် ဘေလ် ကို ဆိုလိုပါသည်။
MPT ၏ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုသည် ကြိုတင်ငွေပေးချေရသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူမှ ယင်းဝန်ဆောင်မှု အား စတင်အသုံးမပြုမှီ တစ်လကြိုတင်၍ ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် နောက်လာမည့်လ ဇန်နဝါရီလ အသုံးပြုခဘေလ်အား သုံးစွဲသူထံ ကြိုတင်ပို့ဆောင်ပေးပြီး ယင်း ဘေလ်အားနောက်ဆုံးထားပေးဆောင်ရမည့် ရက်မှာ ဒီဇင်ဘာလမကုန်မှီအထိဖြစ်ပါသည်။
Case1- ယခုလတွင် ထွက်ရှိသည့် ငွေတောင်းခံလွာအတွက် ပေးချေထားခြင်းမရှိပါ ။ (နောက်လဝန်ဆောင်မှုအတွက်)
15 20 Mbps 182,400 345,600
25 30 Mbps 245,100 464,400
50 60 Mbps 433,200 820,800
100 110 Mbps 684,000 1,296,000
Case 2- ယခုလတွင် ထွက်ရှိသည့် ငွေတောင်းခံလွာအတွက် ပေးချေထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ (နောက်လဝန်ဆောင်မှုအတွက်)
15 20 Mbps 150,400 313,600
25 30 Mbps 202,100 421,400
50 60 Mbps 357,200 744,800
100 110 Mbps 564,000 1,176,000
ကြိုတင်ငွေ ငွေပေးချေမှုပြူလုပ်နိုင်သော MPT TRA ကောင်တာများ
လက်ရှိဖြစ် ပေါ်နေသော COVID19 အခြေနေများ ကြောင့် ကြိုတင်ငွေ ငွေပေးချေမှုမပြုလုပ်မှီ ဖေါ်ပြထားသည့် နီးစပ်ရာ အရောင်းကောင်တာများ ၏ ဖုန်း နံပါတ်များကို ကြိုတင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးမှသာ သွားရောက် ပေးဆောင်ပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ Please see the detail
Bank များမှတဆင့် ကြိုတင်ငွေပေးဆောင်ခြင်း
KBZ KBZ mobile banking မှတဆင့် (သို့) မည်သည့် KBZ ဘဏ်ကောင်တာတွင် မဆို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
AYA AYA mobile banking မှတဆင့် (သို့) မည်သည့် AYA ဘဏ်ကောင်တာတွင် မဆို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
CB CB mobile banking မှတဆင့် (သို့) မည်သည့် CB ဘဏ်ကောင်တာတွင် မဆို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
CB mobile banking user guide, please [ Link ]